China Gym Sports Long Sleeve Women T-uwe elu PY-CT002 rụpụta na Factory | Pinyan
egwuregwu mgbatị ụmụ nwanyị ogologo aka
Kedu otu esi ahọrọ uwe ejiji T-shirt?
1. Ogologo na mkpa
T-uwe elu akwa V-olu ga-eme ka ahụ dum nwekwuo ikuku, adịghị ike nke mkpa dị ka uru, pụta ìhè. Ugbu a ọmarịcha ịma mma niile mara mma, mma a ka onye ọ bụla hụ, ahọrọ ụdị uwe T-uwe na-adịghị mma, nke a ga-adị gịrịgịrị.
T-uwe elu ya na uwe mwụda dabara adaba nke nwere eriri gburugburu bụ nke kachasị mma maka ụdị ahụ. Olu a gburugburu ga-adị ka nke gịrịgịrị karịa, ma n'ozuzu "elu" agbatịala nke ukwuu. Echela na ị pere mpe, ị ga-eyiri onwe gị uwe, nke ga-ada azụ. Zọ kachasị mma iji ejiji bụ nke dabara.
3. Oke ibu
Egwuregwu T-shirt dị mfe ma dị larịị na-enweghị eriri akwa dabara adaba maka ọdịdị ahụ nke ụmụ okorobịa nwere abụba. Ọ dị mkpa karịsịa ịlele nkọwa nke neckline mgbe ị na-ahọrọ ihe kwesịrị ekwesị nke uwe egwuregwu T-shirt. Họrọ oke olu nwere ike ime ka olu dị mfe. Obere uwe elu V-neck adịghị mma, nnukwu V-neck ka mma. V ịghọta na-eme ka abụba ụmụ nwoke yie ndị okuko.
Na-ahọpụta ụdị ubu, dị mfe ma na-emesapụ aka, ejiji na ụdị dịgasị iche iche, dabara adaba maka ndị nwere ụdị ọ bụla.
Ngwaahịa: maka uwe elu mgbasa ozi, uwe ndị otu, nhazi onwe onye, ​​wdg, nwere ike ịhazi agba, ụkpụrụ, njirimara.
1.Q: Gịnị bụ usoro mbupu?
A: Site n'okporo ụzọ awara awara. Dị ka fedex, dhl, tnt na na; site n'ikuku; site n'oké osimiri. Ekpebiri ego mbufe site na mbufe ụzọ & ibu ngwaahịa na ibu n'ezie na adreesị gị zuru ezu.
2.Q: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ?
A: Anyị na-akwado ụzọ nkwụnye ụgwọ dị iche iche (T / T, Visa kaadị, Western union, Moneygram, Secure payment-Escrow, wdg) T / T
Ajụjụ: Anyị nwere ike ibipụta akara ma ọ bụ akara nke anyị na ngwaahịa gị?
A: Ee, ọ bụ ihe na-atọ anyị ụtọ ịbụ otu onye na-emepụta OEM na China iji gboo mkpa OEM gị.
Ajụjụ: Gini mere ngwongwo ufodu ji enwe ihe di iche na onyonyo webusaiti na ihe ndi bara uru?
A: Ebe ọ bụ na ọdịiche dị na ọkụ na ihe nchọgharị, nwekwara ụdị dị iche iche, ihe nwere ike ịbụ obere ihe. Dị ka mkpuchi, yabụ rịba ama na ngwaahịa ga-abụ ihe ọjọọ n'ụdị, oge ụfọdụ, eserese ahụ bụ maka ntụpọ naanị. Ndị a kwere ka ọ bụrụ. ajụjụ, biko gwa anyị tupu ịtụ ma jụọ ya nke ọma.
5.Q: Weghachite na nkwụghachi iwu
1.Anyị na-anabata ịlaghachi na nkwụghachi maka nsogbu nsogbu, dị ka cuttings, oghere, na-agụnyeghị mmebi ọ bụla mmadụ mere mgbe eji ya.
2.Pls kpọtụrụ anyị na foto n'ime ụbọchị 3 mgbe ị natara iwu ma ọ bụrụ na ọ nwere mmebi ọ bụla.
3.Pls comfirm na reture itmes bụ ndị mbụ mbukota, kpọọ / hangtags, enweghị na-asa na unyi.
4.Refts mere ma ọ bụrụ na naanị ndị edochi adịghịzi. Mana maka mbupu ụgwọ nke ngwongwo eweghachi, ndị na-azụ ahịa ga-ahụ maka ya.
5. Anyị ga-edozi nsogbu gị n'ime ụbọchị atọ mgbe izipụchara anyị ozi a
Nke gara aga: Ejiji Diagonal Stripes Long Sleeve Women T-uwe elu PY-CT004
Osote: Plain Cotton Long Sleeve Women T-uwe elu PY-CT001
Fashion diagonal straipu Long uwe Women T-Sh ...